Barca oo hanatay Horyaalka Spain ee La Liga 2018/19. Waana markii 8-daad muddo 11 sano ah. – Somali Sounds
April 28, 2019 April 28, 2019 Somali Sounds.comComment(0)
Barcelona ayaa soo gaba gabaysay tartankii koobka horyaalka La Liga kadib markii ay guul cidhiidhi ah Camp Nou kaga gaadhay kaga gaadhay kooxda Levante. Lionel Messi oo kaydka ka soo baxay Barcelona ka caawiyay in ay guushan ka gaadhay Levante isaga oo dhaliyay goolka kaliya ee ay saddexdii dhibcood ee ay u baahnayd ku heshay Blaugrana.
Barcelona ayaa ku guulaysatay koobkeedii 26 aad ee horyaalka La liga iyada oo xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah koobkan difaacatay waxaana intaas kadib bilawday xafladaynta ciyaartoyda iyo jamaahiirta kooxda Barcelona.
Barcelona ayaa xisaab ahaan horyaalka La Liga u xaqiijisatay iyada horyaalka ay ka hadhsan yihiin 3 kulan oo 9 dhibcood lagu heli karo waana dhibco ayna Atletico Madrid oo kaalinta labaad ku jirtaa koobkan ugu guulaysan karin xataa haddii ay wada guulaysato. Waxaana ay Barca ku qaaday dagaalkii labada kooxood taas oo la macno ah inay ka natiijo wanaagsaneed Kooxda caasimmada ka dhisan labadii kulan ay ciyaareen.
Gobolka Bay ayaa naga soo gaaraya warar sheegaya in duleedka degmada Bardaale qarax miino dhulka…
Qarax xoogan ayaa maqribnimada caawa ka dhacay irida hore ee School Polizia ee magaalada Muqdisho.Goob…
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya SheekhShariif ahna Hoggaamiyaha Xisbiga Himilo Qaran ayaa goor dhow soo gaaray…
April 18, 2019 April 18, 2019 Somali Sounds.com
Tottenham oo taariikh sameeysay iyo macalinkooda oo amaan ugu qubeeye xiddigaha kooxdiisa. Macalinka kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay, kaddib markii ay kaga soo gudbeen Manchester City wareega afar dhamaadka ee tartanka Champions League. Kooxda Manchester City ayaa si fool xuma ah kaga hartay tartanka Champions League wallow ay […]
Manchester United oo goolhaayaheeda weyn karta
Kooxda Manchester United ayaa laga yaabaa inay u ceshan weeyso Goolhaaye David De Gea kaas oo looga gacan haatinaayo dhankaas iyo Horyaalka France iyo Kooxda PSG. De Gea ayaa ah laf dhabarta Kooxda United asiga oo Kooxda jooga tan iyo sanadkii 2011-kii markaas oo ay ka soo iibsadeen Kooxda Atletico de Madrid. Manchester United ayaa […]